people Nepal » जान्नुहोस् कुन अभिनेत्रीसँग छ सबैभन्दा बढी धन ? जान्नुहोस् कुन अभिनेत्रीसँग छ सबैभन्दा बढी धन ? – people Nepal
जान्नुहोस् कुन अभिनेत्रीसँग छ सबैभन्दा बढी धन ?
२४ जेठ – बलिउडका नायिका फिल्मबाट करोडौं कमाउछन् । तर उनीहरुका कमाईको आधार फिल्म मात्रै होइन । फिल्म बाहेक अन्य तरिकाबाट पनि उनीहरुले कामाउने गरेका छन् । जसमा मुख्य आधार हो व्यापारिक विज्ञापन । केही नायिकाको बिजनेश पनि छ । जान्नुहोस् बलिउडकी सबैभन्दा धनी नायिका को हुन् ?
फिल्मबाट टाढा रहेर पनि अमीषासँग पैसाको कुनै कमी छैन । उनले अहिलेसम्म विवाह गरेकी छैनन् । तर उनले आफ्नै प्रोडक्शन हाउसबाट राम्रो पैसा कमाउछीन् । उनीसँग करिब ३० मिलियन डलर सम्पती छ ।